Izindaba - Usayizi wemakethe yomhlaba wonke wemboni ye-transformer uzodlula izigidigidi eziyi-100 ngo-2020
IKhabhinethi Yokusabalalisa Amandla Aphansi
Izesekeli Zekhebula Lokushisa
Izesekeli zeCold Shrink Cable
Uchungechunge Lwe-Fuse Lokulahla
Ukuhlukanisa Shintsha Uchungechunge
Uchungechunge lwe-Surge Arrester
Ibhasi lebha yamabhasi
Ishubhu sebhasi yebha yokushisa eshisayo
I-Silicone Rubber Transformer Bushing
Usayizi wemakethe yomhlaba wonke wemboni ye-transformer uzodlula izigidigidi eziyi-100 ngonyaka we-2020
Eminyakeni yakamuva, imishini yokudlulisa nokusabalalisa imishini yamandla imishini ngokujwayelekile iyanda.
Ukunwetshwa kwezitshalo zamandla, ukukhula kwezomnotho kanye nokufunwa kwamandla emazweni asafufusa kuzothuthukisa imakethe yenguqu yamandla emhlabeni isuka ku- $ 10.3 billion ngo-2013 iye ku- $ 19.7 billion ngo-2020, ngezinga lokukhula lonyaka elihlanganisiwe elingamaphesenti angama-9.6, ngokusho kwezikhungo zocwaningo.
Ukukhula okusheshayo kokufunwa kwamandla eChina, India naseMpumalanga Ephakathi yiyona nto ehamba phambili ekukhuleni okulindelekile emakethe ye-transformer yamandla omhlaba.Ngaphezu kwalokho, isidingo sokushintsha nokuthuthukisa ama-transformer amadala eNyakatho Melika naseYurophu sesibe umshayeli omkhulu we emakethe.
"I-GRID yase-UK isivele ihlupheka kakhulu futhi kungokufaka nokuvuselela igridi kuphela lapho izwe lizokwazi ukugwema ukucishwa kukagesi. Ngokufanayo, kwamanye amazwe ase-Europe, njenge-Germany, kunokulungiswa okuqhubekayo kwegridi ne-elekthronikhi. ukuqinisekisa ukutholakala kukagesi njalo. "Basho kanjalo abanye abahlaziyi.
Ngokubona kochwepheshe, kunezici ezimbili zokukhula okuqinile kwesilinganiso semakethe ye-transformer yomhlaba. Ngakolunye uhlangothi, ukwenziwa ngcono nokuguqulwa kwama-transformer wendabuko kuzokhiqiza isabelo esikhulu semakethe, futhi ukuqedwa kwemikhiqizo ebuyela emuva kungakhuthaza ukuthuthukiswa okusebenzayo kokubhida nokufaka amathenda, futhi izinzuzo ezinkulu zezomnotho zizovela.
Ngakolunye uhlangothi, ucwaningo nentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa, ukusetshenziswa kanye nokunakekelwa kokonga amandla kanye nabaguquli abanobuhlakani kuzoba okujwayelekile, futhi imikhiqizo emisha ngokungenakugwenywa izoletha amathuba amasha entuthuko embonini.
Eqinisweni, imboni yokukhiqiza i-transformer incike ekutshalweni okuvela ezimbonini ezisezansi njengokuphakelwa kwamandla kagesi, igridi kagesi, insimbi, imboni ye-petrochemical, ujantshi, ukwakhiwa kwamadolobha nokunye.
Eminyakeni yakamuva, kuhlomula ngentuthuko esheshayo yomnotho wezwe, ukutshalwa kwezimali ekwakhiweni kokuphakelwa kukagesi kanye negridi kagesi bekukhuphuka, futhi isidingo semakethe semishini yokudlulisa nokusabalalisa sikhuphuke kakhulu. Kulindeleke ukuthi isidingo semakethe yasekhaya se-transformer neminye imishini yokudlulisa nokusabalalisa izohlala isezingeni eliphakeme kakhulu esikhathini eside esizayo.
Ngasikhathi sinye, isikhungo somsebenzi segridi kahulumeni kanye necebo lokuthuthuka lomkhakha wonke wamandla kagesi unethonya elikhulu, ukusatshalaliswa kwenethiwekhi okuzenzakalelayo nokuqaliswa komsebenzi we-retrofit kuzothuthukisa ukufunwa kwemakethe ye-transformer, ukubhida kuzokwandisa kakhulu inani emakethe yenguqu yomhlaba jikelele iyothambekela kancane kancane ibheke eChina, ukusetshenziswa kwemikhiqizo esika onqenqemeni kulindelwe ukuthi kube nomphumela ongcono eChina.
Isikhathi sokuthumela: Aug-19-2020
Amadivayisi: No 6, Minxin Road, lvdao zone zezimboni, Shijiazhuang, Isifundazwe Hebei, China